‘साहो’ सँग डराएको छ बलिउड, पहिलो दिन तोडिनेछ कमाईको सबै रेकर्ड ! | Ratopati
फिल्म साहोका लागि प्रभासका प्रशंसक अत्यधिक उत्साहित छन् । फिल्म युएईमा भारतभन्दा एकदिन अघि नै रिलिज भइसकेको छ र प्रशंसकले यसलाई ब्लकबस्टर पनि भनिरहेका छन् । भारतमा साहो ३० अगस्टमा १० हजार स्क्रिनमा रिलिज भइरहेको छ ।
साहोले रिलिज अघि नै विभिन्न रेकर्ड तोडिसकेको छ । बक्स अफिसमा बलिउड फिल्मनिर्माता डराइरहेको पनि भन्ने खबर आइरहेको छ । त्यसैले त साहोको वरिपरि टाढाटाढासम्म कुनै ठूला फिल्म रिलिज हुने योजनामा छैनन् ।
चार भाषामा रिलिज भइरहेको साहोले पहिलो दिन नै पुराना सबै रेकर्ड तोडिने आशा छ ।
साहो कसरी हिन्दी फिल्मका लागि खतरा बनेको छ र कसरी साहोले पहिलो दिनमै २.०, ठग्स अफ हिन्दोस्तान र बाहुबली टुको केलक्सनलाई तोड्न सक्छ ?
फिल्मले पहिलो दिनमा सय करोडको कमाई गरेको खण्डमा त्यति आश्चर्य मान्नुपर्दैन । वास्तवमा आँकडालाई हेर्ने हो भने रजनीकान्तको २.० विश्वव्यापी १० हजार स्क्रिनमा रिलिज भएको थियो जसमध्ये ७८५० स्क्रिन भारतमा थियो । फिल्मले पहिलो दिन भारतमा ७० करोडको व्यापार गर्यो । यस्तै, बाहुबली टुको कुरा गर्ने हो भने यो फिल्म विश्वव्यापी ९ हजार स्क्रिनमा र भारतमा ६५०० स्क्रिनमा रिलिज भयो । बाहुबली २ ले पहिलो दिन १२१ करोड कमाएर इतिहास रच्यो ।
साहो भारतमा मात्रै १० हजार स्क्रिनमा रिलिज हुँदैछ । विदेशको स्क्रिन काउन्टको कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त छैन । यस्तोमा साहोले पहिलो दिन कमाईको सबै पुरानो रेकर्ड तोड्न सक्छ । साउथमा त सिंगल स्क्रिन्समा साहोको टिकटको मूल्य बढाएको पनि खबर आइरहेको छ ।
हुन त केही ट्रेड एनालिस्टको अनुमान अनुसार पहिलो दिन साहोको भारतमा कुल कलेक्सन ७५ करोड नजिक हुनसक्छ । साहोको हिन्दी संस्करणले पहिलो दिन १५–२० करोड कमाउन सक्छ ।
यदि साहोले पहिलो दिन ६० करोड बढी कमाउन सफल भयो भने फिल्म ठग्स अफ हिन्दोस्तान, एभेन्जर्सः एन्डगेम र कबिर सिंहको पहिलो दिनको बक्स अफिस कलेक्सनको रेकर्ड तोड्नेछ ।